Panasonic ကရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွင်တင်ခဲ့သည် - 4K LCD LED panel HDR10 + | Gadget သတင်း
Panasonic သည်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် 4R LCD LED HDR10 + ပါဝင်သည့် panel ကိုပြသခဲ့သည်
လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် OLED ဖန်သားပြင်များထည့်သွင်းထားသောတီဗွီကြည့်သည့်အရာထက်သာလွန်သည်မဟုတ်ပါ၊ အမှန်တရားမှာ၎င်းပြားများသည်ဇိမ်ကျပုံပေါက်နေသော်လည်းအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Panasonic သည် HDR4 + ပါ ၀ င်သည့် 10K LCD LED တီဗီအသစ်များနှင့်အတူ.
တီဗီများ၌ဤအပြားများကိုထည့်ရန်အကောင်းဆုံးအရာမှာကျွန်ုပ်တို့သည်သက်သေပြချက်မရှိသောနည်းပညာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပြီးယနေ့တွင်ရုပ်မြင်သံကြားဝယ်ယူရန်အတွက်အရေးကြီးသည့်ဘဏ္financialာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာဖြစ်သည်။ နှင့်ဤအညီ, OLED ၏စျေးနှုန်းသည် LCD LED ၏စျေးထက်များစွာပိုများသည်.
အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို panel နှစ်ခုလုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော် Panasonic သည်၎င်း၏ FX အကွာအဝေးနှင့်အတူဤဖန်သားပြင်အတွက်အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ် ၀ င်စားမှုရှိသည်။ HDR10 +, Google Assistant နှင့် Amazon Alexa များရှိသည့်အပြင်၎င်းကိုနေ့စဉ်ပြားပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ထို့နောက်သင့်ကိုတင်ပြပြီးသော FX စီးရီးလေးခုအတွက်ဝိသေသလက္ခဏာများဇယားနှင့်သင်ထားခဲ့သည် GA10 နှင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ကျွန်ုပ်တို့၏အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်ရန်ရုပ်မြင်သံကြားတွင်ထည့်သွင်းထားသောစပီကာတစ်ခု လက်ထောက် Alexa နှင့် Google Assistant အပြင်:
အများဆုံး Refresh Rate
Local မှိန်မှိန် Pro ဒေသဆိုင်ရာမှိန်ခြင်း ဒေသဆိုင်ရာမှိန်ခြင်း အလိုက်နောက်ခံအလင်းမှိန်ခြင်း Plus
ဟုတ်သည် (HDR10 + ဖြင့်) ဟုတ်သည် (HDR10 + ဖြင့်) ဟုတ်သည် (HDR10 + ဖြင့်) ဟုတ်သည် (HDR10 + ဖြင့်)
အမေဇုံ Alexa နှင့် Google လက်ထောက် အမေဇုံ Alexa နှင့် Google လက်ထောက် အမေဇုံ Alexa နှင့် Google လက်ထောက် အမေဇုံ Alexa နှင့် Google လက်ထောက်
75, 65, 55 နှင့် 49 လက်မ 65, 55 နှင့် 49 လက်မ 65, 55 နှင့် 49 လက်မ 65, 55, 49 နှင့် 43 လက်မ
ဒီမော်ဒယ်လ်တွေထဲကတစ်ခုချင်းစီဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အသေးစိတ်ကျပါတယ် အဆိုပါ FX780 မော်ဒယ်, ဖော်ပြချက်တွင်သင်မြင်သည်အတိုင်း, OLED မဝယ်ချင်သောသူတို့အဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့အခြားရွေးချယ်စရာပေးထားပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းတွင် Art & Interior Glass ဒီဇိုင်းရှိပြီးဖန်သားပြင်သည်အလွန်ပါးလွှာသောဖန်ဘောင်များနှင့်နယ်နိမိတ်မရှိဘဲစွန့်ခွာပြီးဖုန်း၏မျက်နှာပြင်ကိုတိုင်းတာသည်။ သူတို့ ၇၅ လက်မအထိတက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ့်သားရဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။
အောက်ပိုင်းအကွာအဝေးကိုကြည့်နိုင်ပါတယ် အဆိုပါ FX740 မော်ဒယ်ဒီဇိုင်းသည်ယခင်ပုံစံနှင့်အလွန်ဆင်တူသော်လည်းအများဆုံးအရွယ်အစား ၆၅ လက်မရှိပြီး ၅၅ နှင့် ၄၉ လက်မအထိမော်ဒယ်များကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဤကိစ္စတွင် panel သည် refresh rate အနည်းငယ်နိမ့်ပြီး 65Hz သို့ရောက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှတ်တံဆိပ်၏ထိပ်တန်းမော်ဒယ်ကိုမလိုချင်ပါကအလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုသေချာသည်။ နောက်ဆုံး FX model ၏ဤစီးရီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် အဆိုပါ FX600 နှင့် FX700မော်ဒယ်နှစ်ခုစလုံးသည်ထပ်ဆောင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဒီဇိုင်းအရပိုမိုမျှတမှုရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဤအကြောင်းကြောင့်အကွာအဝေးမှသွေဖည်စရာမလိုဘဲဤအကွာအဝေး၏ ၀ င်ရောက်မှုအကွာအဝေးအတွက်အကောင်းဆုံးတီဗီများအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီသည် Las Vegas ရှိ CES တွင်မော်ဒယ်များကိုတင်ပြခဲ့သည် ကျနော်တို့ရောင်းချသည့်ရက်စွဲများနှင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းမရရှိနိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » တီဗီများ » Panasonic သည်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် 4R LCD LED HDR10 + ပါဝင်သည့် panel ကိုပြသခဲ့သည်
ဤရွေ့ကား SpaceX ၏ 2018 ခုနှစ်, သူတို့သည်သမိုင်းကိုသုံးကြိမ်စေမည်သည့်နှစ်တွင်အဘို့အစီအစဉ်များဖြစ်ကြသည်